Dowladda Somaliya oo war ka soo saartay cadaadiska Beesha Caalamka | Dhacdo
Home Wararka Maanta Dowladda Somaliya oo war ka soo saartay cadaadiska Beesha Caalamka
Dowladda Somaliya oo war ka soo saartay cadaadiska Beesha Caalamka
Dowladda Federaalka Somaliya ayaa saqdii dhexe ee caawa soo saartay Warsaxaafadeed ay ugu jawaabeyso baaqyada caalamiga ah ee haatan kaga imaanaya Beesha Caalamka.
Warsaxaafadeed ka soo baxay Dowladda Somaliya:–
Dowladda Federaalka Somaliya waxay si aad ah uga xumaatay inay aragto hadalada bulshada ee qaar ka mid ah saaxiibbadeeda caalamiga ah iyo saaxiibbada muddada dheer ay ku marin habaabinayaan sharciyada ay soo saaraan Hay’adaha Dowladda ee lagu ilaalinayo xuquuqda dimoqraadiyadda ee shacabka ee ay ku dooranayaan hoggaankooda.
Dadka Soomaaliyeed waxay u oomanaayeen fursad ay ku gutaan xuquuqdooda dimoqraadiyadeed oo ay ugu adeegsadaan awoodda codkooda doorashada hoggaamiyeyaashooda. Inkastoo maamulkani dadaal badan ku bixiyay himiladan, Setember 17, 2020, hoggaamiyeyaasha siyaasadeed ee Somaliya waxay isku raaceen in la joojiyo hannaankaas oo la qabto doorasho dadban taa bedelkeeda.
Sida ku cad qodobka 47aad ee dastuurka KMG ah ee Somaliya, Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Somaliya wuxuu awood u leeyahay inuu soo saaro sharciyo gaar ah oo qeexaya xeerarka khuseeya doorashooyinka heer federaal.
Inkastoo aan ka mahadcelinno walaacyada saaxiibbadeen iyo saaxiibbadeenna caalamiga ah ee ku aaddan xasilloonida iyo nabadgelyada Somaliya, haddana waa wax laga xumaado in markhaati laga noqdo u ololeynta mabaadi’da dimoqraadiyadda oo ka gaabinaysa taageeridda himilooyinka dadka Soomaaliyeed ee ah in ay ku dhaqmaan xuquuqdooda dimoqraadiyadda.
Hadalada xanafta leh ee ay ku raran yihiin hanjabaadaha, ee wax u dhimaya madaxbanaanida siyaasadeed iyo xuquuqda madaxbanaan ee hay’adaha qaranka, waxay kaliya u adeegi doonaan dhiirigelinta ururada argagixisada iyo kuwa nabadiidka ah ee Somaliya.
Previous articleRa’iisal Wasaare Rooble iyo Qoorqoor oo loo kala baxay
Next articleDadaalo lagu baajinayo in la weeraro General Saadaq Joon oo socda